Ifulethi lonke ku-40 sqm umjikelezo womjikelezo - I-Airbnb
Ifulethi lonke ku-40 sqm umjikelezo womjikelezo
Sant'Eusanio Forconese, Abruzzo, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Domenico
U-Domenico Ungumbungazi ovelele
Kulesi sikhathi esiwubhubhane, ifulethi elincane ekwakhiweni okusha, elizimele ngokuphelele futhi lizungezwe uhlaza, ngokuqinisekile kuyisixazululo esihle kakhulu sokuchitha izinsuku ezimbalwa zokuphumula uphephile ngokuphelele. Inikeza izivakashi zayo ikhishi elizimele, indawo yokuzivocavoca encane ene-spinning, itafula elincane le-ping pong, ukuqashwa kwamabhayisikili kanye nengadi enkulu. Imithambeka yokushushuluza e-Campo Felice ingafinyelelwa cishe ngesigamu sehora, kanti kuleyo yaseCampo Imperatore, ithatha imizuzu embalwa eyengeziwe.
Ifulethi elisanda kwakhiwa, cishe amamitha-skwele angama-40, imibhede emi-2 (ingaba ngu-3), ikhishi, igumbi lokugezela, ingadi enkulu esetshenziswa izivakashi. Uxhumano lwe-wi-fi olunesivinini esikhulu.
Ifulethi litholakala emaphethelweni edolobhana elincane e-L'Aquila hinterland, Sant'Eusanio Forconese, elifinyeleleka kalula ngezithuthi zomphakathi nezizimele. Indawo enhle kakhulu yokuqala yohambo lwamabhayisikili, futhi engekude nezindawo ezithakaselwa izivakashi (Caves of Stiffe, Lake of San Demetrio, Necropolis of Fossa, Rocca di Sant'Eusanio nokuningi). Eduze, cishe amakhilomitha ayi-10, kunesitebele sokugibela abathandi bokugibela amahhashi.
Umsingathi uhlala etholakala, futhi uhlinzeka ngamabhayisikili (ukuqashwa) ngohambo oluqondisiwe nolungaqondiswa. Kungenzeka futhi isevisi yokuthutha ukuya nokubuya edolobheni.
UDomenico Ungumbungazi ovelele